Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Manambatra Ny Heriny Ireo Mpampiasa Twitter Ho Fanaraina Mikasika Ny Mafàna Fo Voafonja · Global Voices teny Malagasy » Print
Arabia Saodita: Manambatra Ny Heriny Ireo Mpampiasa Twitter Ho Fanaraina Mikasika Ny Mafàna Fo Voafonja
Voadika ny 17 Marsa 2012 11:48 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Ireo Saodiana mpampiasa Twitter dia nanambatra ny heriny mba hanasongadina ny fijalian'i Shaikh Yusuf Al-Ahmad, gadra politika iray, any anaty tranonkala fitorahana bilaogy kiritika. Ny ezak'izy ireo dia nahatonga ny anaran'ilay manampahaizana lalina momba ny resaka Islamika ho malaza be eran-tany, nanaitra ny saina mikasika ny famonjàna azy tsy nisy vesatra sy tsy nahazo fitsarana tsy miangatra.
Essam Al Zamil maneso hoe [Ar]:
@essamz: Lehibe Andriamanitra! Malaza eran'izao tontolo izao ny anaran'i Shaikh Yousif Al-Ahmad
Blake Hounshell, mpamoaka ny politika momba ny raharaha ivelany dia mizara fomba fijery mifanahantsahana amin'izay, izay eken'ilay bilaogera Saodiana Ahmed Al Omran :
@ahmed : Dia nataon-dry zareo tokoa ilay izy RT @blakehounshell : Fotoam-piovàna? Nahazo an'i al-Ahmad, olona iray voafonja, hatao lohahevitra ireo Saodiana mpandefa bitsika.
Al-Ahmad , malaza eran-tany ao amin'ny Twitter
Araka ny ambaran'ny Human Rights Watch, Al-Ahmad dia voasambotra  noho ny fanehoan-keviny taminà lahatsary iray nakariny tao amin'ny YouTube, ny 7 Jolay 2011, nanakiana ny fitànana am-ponja mandritra ny fotoana ela ireo olona ahiahiana nefa tsy misy vesatra iampangàna azy na mba nandalo fitsarana.
Somary maneso, ireo manampahefana Saodiana dia tsy nanambara vesatra anenjehana an'i Al-Ahmad, izay nofonjaina efa valo volana lasa izao, ary olona nampianatra tao amin'ny Anjerimanontolo Imam Muhammad bin Sa'ud ao Riyadh.
Ny fanentanana ao amin'ny Twitter amin'ity alina ity dia ho fanairana mikasika ny famonjàna azy izay niafara tamin'ny fanehoan-kevitra nirarak'ompana, na izany teo ambanin'ny fampiasàna ny anarany Al-Ahmad  , na ny tenifototra #justice4YA  .
Ilay fanentanana dia tarihan'i @SaudiDetainees , taorian'ny fahombiazan'ny fanentanana voalohany nalefan-dry zareo teo amin'ny Twitter mba hisarihana ny fifantohan-tsain'ny olona mikasika gadra politika iray hafa – 34 taona, Mohammed Albajady , izay efa any am-ponja nandritra ny herintaona, tsy nisy vesatra ary tsy nandalo fitsarana tsy mitanila ihany koa.
Manoratra i Al Zamil hoe:
@essamz : TSIA, hoy izy, manolona ny tsy rariny. ENY, hoy isika, ho an'ny fahafahany #justice4YA
Khaled Al Naser manampy hoe [ar]:
@Mashi9a7 : Rehefa mangataka ny rariny ho an'i Yusuf Al-Ahmad isika, dia mangataka izany ho an'ireo olona rehetra notanana tsy amin'antony. Angatahantsika izany ho an'ireo Islamista tsirairay sy liberaly ary ny Sunnite sy Chiites tsirairay. Ho an'ny rehetra ny rariny sy ny fahalalahana.
Ary ilay Saodiana bilaogera malaza Fuad Al Farhan, izay efa voasambotra noho izay nosoratany tao amin'ny bilaoginy, dia mampindrana ny feony ho an'ilay fanentanana. Hoy izy manoratra :
@alfarhan: Fahafahana ho an'i Shaikh Yusuf Al-Ahmad. Fotoana izao hanakatonana mandrakizay an'ity Tokonà fisamborana sy famonjàna ity sy ho antsika amin'ny maha-firenena ary ny governemanta mampibaby antsika izany sy mitohy manohy ny làlany
Al-Ahmad koa dia mitazona kaonty twitter ato – @yusufalahmed . Ilay kaonty dia mpanohana iray no mitantana azy ankehitriny, izay mibitsika ireo fanavaozam-baovao mikasika an'i Al-Ahmad, ny fepetran'ny famonjàna azy, ary ny toe-pahasalaman'ny reniny efa antitra, izay mararin'ny homamiadana.
Reporters sans frontières dia nametraka  an'i Arabia Saodita ho ny fahavalon'ny Aterineto ao anatin'ny lisitra navoakany ho an'ny taona 2012 ahitàna ireo firenena izay manivana ny Aterineto sy manakenda ny fahalalahana miteny. Resaka fotoana fotsiny sisa dia hohitantsika hoe mandram-pahoviana no hitohizan'ny fahalalahan'ireo Saodiana mpiondana aterineto miteny mivantana ety anaty aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/17/30500/
 Mohammed Albajady: https://globalvoicesonline.org/2012/03/05/saudi-arabia-tweeting-albajadys-hunger-strike/